Impilo yabesifazane Ukukhulelwa
Ngesikhathi sokukhulelwa, cishe bonke abesifazane bayazibuza: Kungenzeka yini ukuthi abe nobulili phakathi nalesi sikhathi futhi kungathinta kanjani ingane ezayo? Omunye unquma lo mbuzo kabi, futhi wenqabe ngokuphelele ebuhlotsheni obuseduze, kahle, omunye umuntu uyaqhubeka nokuphila ngokocansi, naphezu kwesimo sabo "esithakazelisayo". Futhi-ke, onguchwepheshe kuphela ongakutshela ukuthi ungaqhubeka kanjani ngqo kuleso simo. Akuyona imfihlo kunoma ubani ukuthi ukukhulelwa nokubeletha kunomthelela othile ebuhlotsheni bobulili. Ake sicabangele ngokuningiliziwe zonke izinguquko ezenzeka kule nkathi. Kungakhathaliseki ukuthi ucansi luphephile ngesikhathi sokukhulelwa yisihloko sendaba yethu.
Njengomthetho, odokotela abancoma ukuthi babe nobulili ngaphansi kwezimo ezithile, isibonelo, uma kukhona isongo sokukhipha isisu, ukukhulelwa, ukungena kwegazi lesisu, ukubeletha ngaphambi kwesikhathi, ukuvuza kwe-amniotic fluid, placenta ephansi noma ukutheleleka kobulili komunye wabalingani. Kuzo zonke ezinye izimo, azikho imingcele ekuqhubekeleni ubudlelwane obuseduze. Futhi ucwaningo lwesayensi lwamuva lufakazela ukuthi kwezinye izimo, ubulili bubalulekile nje.
Nazi ezinye izici ezinhle zocansi ngesikhathi sokukhulelwa:
Kukhona ubandlululo lapho phakathi kocansi kungenzeka ukulimaza ingane ezayo. Eqinisweni, lokhu akunjalo, ingane ifihliwe ngaphansi kwezingqimba eziningana, ukuyivikela kunoma iyiphi ingozi. Udonga lwangaphakathi lwesisu ngamasipha kanye namaqanda amaningana amafutha, kanye nezicubu ezinzima ezihlangene; isibeletho ngokwawo, esinezicathulo, i-membrane ye-fetal, isambatho sesisu esishubile ngamanzi - konke lokhu kukhishwa noma yikuphi ukudlidliza, futhi ekugcineni, ipulaki elimangalisa elivala umlomo wesibeletho.
Ngesikhathi socansi nomuntu othandekayo, umzimba wesifazane ukhiqiza amahomoni enjabulo, futhi anomphumela omuhle kwengane.
Ngokuziqeda isikhathi eside, owesifazane okhulelwe uqala ukuqoqa imizwelo emibi.
Ngesikhathi ukhulelwe, asikho isidingo sokuzivikela.
I-sperm iqukethe ama-enzyme namahomoni wesilisa (prostaglandins), anemiphumela emihle, asiza umlomo wesibeletho ukuthobisa, okuzosiza ukuthi avule kangcono ngesikhathi sokubeletha.
Ngesikhathi socansi, kukhona ukuchotshozwa kwemisipha yesibeletho, ekhonza njengendlela yokuqeqesha ngesikhathi sokubeletha, okukuvumela ukuba ugweme umsebenzi obuthakathaka wabasebenzi. Ngaphezu kwalokho, uma kukhona amahomoni angamadoda okwanele, lesi sibeletho sizovula ngokushesha.
Ngesikhathi esilandelayo nangemva kwesikhathi, lesi sibeletho siqala ukuvumelanisa, futhi akukho usongo kumntwana ongakazalwa. Kumele kuqashelwe ukuthi uma isisu singakakulungeli ukubeletha, khona-ke izingxabano zalo ngesikhathi se-orgasm azikwazi ukubangela ukuqala komsebenzi. Kodwa uma isikhathi sokukhulelwa sesivele sikhulu kakhulu, lokhu kuzosusa ukuqala kwempi. Yingakho abanye odokotela beluleka ukuthi babe nobulili, njengesiqalo esincane sokusebenza emasontweni angama-39 kuya kwangu-40.
Akunakwenzeka ukusho ukuthi isifiso sobulili ngesikhathi sokukhulelwa sizokwenyuka noma senyuke ngokuphambene nalokho. Konke lokhu kuncike ezintweni eziningi, kufaka phakathi umsebenzi wocansi komuntu wesifazane ngaphambi kokukhulelwa, kanye nokushintshashintsha kwamahomoni ngesikhathi sokukhulelwa. Kulesi siqeshana, kukhona uphawu oluthandwayo: uma owesifazane elindele umfana, izinga lokuziphatha ngokobulili liphakeme (cishe kungenzeka ukuthi lokhu kungaba inombolo ephezulu yamamoni angu-"amadoda"), futhi uma intombazane ilinde, khona-ke iphansi. Abanye besifazane bakhuphuka kakhulu ukwanda kwesifiso sobulili, okungakhula nokwanda ngesikhathi sokukhulelwa. Kulesi simo, lesi sikhathi singakhunjulwa njengehle kakhulu, kokubili owesifazane nendoda. Ungacabangi ukuthi wenza okuthile okuyihlazo, kepha kunalokho sebenzisa umzuzwana ngenkathi usencane kakhulu ekuziphatheni ngokobulili.
Kungenzeka ukuthi ngesikhathi sokukhulelwa, isifiso singaphela noma sinyamalale ngokuphelele. Lokhu kuqondakala kuyaqondakala, ngoba phakathi nalesi sikhathi i-hormone yokuzola iqala ukukhula, umzimba wonke wesifazane uphethwe ngokuzala komama esikhathini esizayo. Kulokho, lapho ulindele izibulo, owesifazane angase abe nomuzwa wesaba ngenxa yesimo sakhe esisha, kanye nokwesaba ukubeletha. Ngaphansi kwezimo ezinjalo, umuntu anganconywa ukuba ashintshe indlela yakhe kumfazi wakhe, futhi uzokwakhiwa kabusha ukuze abe nobuhlobo obuningi be-platonic. Kubalulekile ukwelapha owesifazane okhulelwe enesineke nokubekezela okukhulu, ukuzama ukumbonisa ukunakekelwa kwakhe nokuthandana kaningi ngangokunokwenzeka. Ngokuvamile, ukuziphatha ngokocansi kowesifazane okhulelwe kungachazwa njengempendulo. Izinyanga ezintathu zokuqala ezithakazelisayo ngocansi ziqala ukwehla, izinyanga ezintathu ezilandelayo - zikhukhumezekile, futhi ezinyangeni ezintathu zokugcina - ziphinde zinciphise. Kungani lokhu kwenzeka? Ngokuvamile kubonakala ukuthi owesifazane wesifazane uyancipha ngenxa yokuqala kwesifo sofuba nokubonakala kwesicabucabu, impilo ejwayelekile empofu, ukukhathala, ukushintsha kwemizwa njalo (izinyembezi ezingekho emthethweni, ukukhathazeka), ukudweba izinhlungu esifubeni.
Ku-trimester yesibili, ukwesaba nokukhathazeka kancane kancane kuqala ukuyeka. Ithuthukisa impilo yonke, futhi ngenxa yalokho, isifiso sobulili sanda. Odokotela abaningi basabela kahle kwezocansi kule nkathi, ngoba isisu esibelethweni siphelile, futhi izidumbu ezintsha ze-hormonal emzimbeni azibonwanga. Ku-trimester yokugcina, izifiso ziyancipha. Ngokuyinhloko, lokhu kungenxa yokungazi kahle ngokomzimba wesifazane okhulelwe, isisu esikhulu singathinteka, futhi kubangele ubuhlungu phakathi kokusondelana nomyeni. Kungenzeka futhi kubukeka ubuhlungu phakathi kobudlelwane obuseduze. Isimo sengqondo sowesifazane sishintsha, kukhona ukwesaba ukuzalelwa, ngaphambi kokungaziwa.
Izici zezocansi "ezikhulelwe"
Kodwa ngaphandle kwowesifazane, indoda ingase ibone ukwehla kwesifiso sobulili, ikakhulukazi ezinyangeni zokugcina zokukhulelwa. Isimo esinjalo singavela ngenxa yokukhathazeka ngesimo esisha kuye, ukuqaphela izinguquko empilweni, kanye nesidingo sokubhekana nezinkinga ezivame kakhulu ezihlobene nokuthenga isikhalazo, umgibeli wokuhamba, izingubo zezingane ezizayo, isidingo sokwenza ukulungiswa endlini, njll. Nakuba kuncike kakhulu ekusebenzeni ngokobulili bobabili abalingani. Kodwa kunoma yikuphi, kule nkathi kudingekile ukuba ulungele ukuthi kungadingeka ukunciphisa inani loxhumana nabo kancane, futhi ubuyekeze iziphakamiso ezikhethiwe.
Kunezinqatshwa ezimbalwa kuphela ezithandweni zobulili kumuntu okhulelwe:
Ngaphandle kwalokho angeke ahlanganyele ku-cunnilingus (oral sex, ehambisana nokugqugquzelwa kwesifazane).
Akuvunyelwe ukulala nobuhlobo obusha, ngoba kukhona ingozi yokuthola isifo.
Uma ngesikhathi sokubeletha kwakungekho izinkinga, isibonelo, ukucubungula noma ukuhlukana kwe-perineum, kanye nokungenwa kwe-intervention, ngakho-ke kunconywa ukuba ubaleke ocansini zingakapheli amasonto ayisithupha kuya ku-8. Uma ungafuni ukubekezela isikhathi esinjalo, ungalinda, okungenani ekupheleni kokuphuma kwegazi. Kubalulekile futhi ukwazi ukuthi uma owesifazane ebeletha, ngesikhathi sokuthakazelisa, ubisi lungase luqale ukuphuma phakathi kwezinsipho, futhi kungadingeka ukusebenzisa i-lubricant eyengeziwe. Ukuze ugweme izinkinga ezingadingekile, kufanele uxhumane nodokotela wakho futhi ngokuphathelene nokwelashwa okwengeziwe. Kukhona ukungaqondi kahle ukuthi uma uncelisa, awukwazi ukukhulelwa. Lokhu akulona iqiniso, umsebenzi we-ovaries ungabuyiselwa futhi phakathi nalesi sikhathi, futhi ekuthomeni kokuqala kokubeletha ukukhulelwa okusha kungenzeka. Konke okukhulunywe ngenhla okusho ngocansi ngesikhathi sokukhulelwa kungaboniswa ngenye inkulumo: "Ubulili ngesikhathi sokukhulelwa nangemva kokubeletha - ungakwazi, kuyadingeka, kodwa ngokunakekelwa nangothando."
Lapho umzimba ubonakala i-striae
Ukubeletha nokukhulelwa okusha
Izimpikiswano eziphathelene nomama
Ukuthuthukiswa kwe-Fetal, isonto lesithupha lokukhulelwa
Ukuhlanzeka komuntu wesifazane okhulelwe
Yini eyenza ithoni yesibeletho ngesikhathi sokukhulelwa?
I-antibiotics ithinta kanjani ukukhulelwa?
Izinwele ze-Fashionable zika-2014 ezivela ku-Sasha Breuer
Isiphuzo samavithamini aluhlaza ngekhonathi
Makeup kanye nekhanda lamantombazane abanomzimba ojikelezayo
Ama-pisces: i-horoscope ekwindla ka-2013
Izindawo zokudla kwasekuseni ezithandwa kakhulu
Izinja zokudla ezinhlobo ezincane
Izinwele ezingcono kakhulu zezinwele ezingavamile
Izambatho zezingane eziphathekayo eziphathekayo
Indlela yokusabela kahle ngokuxhumana kwakhe okusolisayo kumanethiwekhi omphakathi
Iyini igama langempela likaVladimir Zhirinovsky nendodana yakhe
I-Horoscope yamaVirgi ezalwa ngonyaka ka-Tiger
I-Oat ibambelela ubhiya
IsiShayina Shiatsu Point Shiatsu (Shiatsu)
Ezemidlalo ezidumile, ezemidlalo yasebusika
Ungashintsha kanjani ekilasini lebhizinisi ngaphandle kokukhokha okungeziwe?